61 ruux oo kuleyl ugu dhintay Masar - BBC Somali
61 ruux oo kuleyl ugu dhintay Masar
13 Agoosto 2015
Ugu yaraan 61 ruux ayaa ku dhintay saddex maalmood kulaylka Masar, sid aay sheegtay wasaaradda caafimaadka iyadoo heer kulka uu gaaray 47C ama 116F.
Afartan ruux ayaa kulayl u dhintay axadii iyo isniintii iyadoo 21 kalena ay dhinteen talaadadii sida warbaahinta dowladdu ay sheegtay. 581 ruux oo kale ayaa kulayl dartii loo dhigay Isbitaalka, waxayna badi dadkaasi ahaayeen waayeel balse waxay warbaahinta gudaha soo wariyeen inay ku jiraan dhowr maxbuus iyo bukaanada isbitaalka dhimirka.
Xabsiyada Masar ayaa lagu yaqaan kuwa aad u buuxa iyadoo wargeys uu sheegay in dhimashada isbitaalka dhimirka ay ka timid dayacaad.
Wasaaradda tamarta ayaa sidoo kale cimilada u sababeysay inay keentay dab la'aan baahsan, oo ka dhacday dhowr saacadood oo talaadada aheyd degmooyin Qaahira ka tirsan, taasi oo keentay in tareenka magaalada uu hakado.
Kulayl daran ayaa ka jiray Bariga Dhexe ilaa dhamaadkii July.